Indlu encinci entle eMontemerano - I-Airbnb
Indlu encinci entle eMontemerano
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGiovanna
Kumbindi wembali welali yakudala yaseMontemerano, imizuzu elishumi ukusuka eTerme di Saturnia kunye neCascate del Mulino, le ndlu imnandi ivaliweyo sisiqalo esigqibeleleyo sokufumana ubuhle bale ndawo.
Amanyathelo ambalwa ukusuka endlwini kukho: indawo yokubhaka, umthengisi wephephandaba, ibha, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zewayini.
Endlini kukho incwadi yeendwendwe enolwazi malunga neendawo zokutyelela kunye neendawo zokutyela ezikungqongileyo.
Indlu inegumbi lokulala (ibhedi ephindwe kabini kwi-loft yokhuni), bonisa ukupheka, igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo kunye nebhedi ye-sofa (ilungele abantwana be-2), igumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlambela kunye nentendelezo encinci yangaphandle kunye netafile encinci enezitulo apho ukunambitha okulungileyo. ikofu okanye iglasi yewayini.
4.86 · Izimvo eziyi-265
Idolophu yakudala yaseMontemerano iya kukuvumela ukuba uphefumle umoya wamandulo!
Umbuki zindwendwe ngu- Giovanna
Iindwendwe ezithandekayo ndifuna ukuba nazi ukuba indlu yam ihlala i-SANITIZED emva kokuhlala rhoqo kunye neemveliso ezikhethekileyo njengoko kufuneka ngalo mzuzu ukuze uthule ngale nto !!
Endlini uya kufumana zonke iimveliso endizisebenzisayo ukucoca indlu. Ukuba ufuna ulwazi oluninzi nceda uqhagamshelane nam.
Iindwendwe ezithandekayo ndifuna ukuba nazi ukuba indlu yam ihlala i-SANITIZED emva kokuhlala rhoqo kunye neemveliso ezikhethekileyo njengoko kufunek…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Montemerano